बेलमायाको पीडा कसले देख्छ ? – bampijhyala.com
Home > जीवन शैली > बेलमायाको पीडा कसले देख्छ ?
बेलमायाको पीडा कसले देख्छ ?
८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९ bampijhyala
बाँपीझ्याला । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकामा ब्लकले बनेको सानो घर । बेलमाया बस्नेतको त्यो घरभित्र १५ जनाको परिवार छ । जसमध्ये ४ छोरा र बुहारीसहित ९ जनाले कान सुन्दैनन् । पति पक्षघातका कारण लामो समयदेखि थलिएर उठ्न सक्दैनन् । आफूसहित १५ जनाको अभिभारा अहिले बेलमायाको काँधमा छ । छोराबुहारीको कमाइ खाँदै नातिनातिना खेलाएर बस्नुपर्ने ५५ वर्षीया बेलमायाले परिवार पाल्न संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले परिवारमा झन् समस्या निम्त्याएको छ । सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने छोराहरूले कोरोनाका कारण ज्याला–मजदुरी काम पनि पाएनन् । यस्तो बेला बेलमायाले दैनिक मजदुरी नगर्दासम्म बस्नेत परिवारमा बिहान–साँझ चुलो बल्दैन । महामारीले गर्दा छोराहरूले मजदुरी पाएनन् । सांकेतिक भाषा बुझ्न नसक्दा काम पाउनै गाह्रो भएको छ । मै बुढीले दैनिक ज्यालादारी नगरी चुल्हो बल्दैन बेलमायाले दुखेसो पोखिन् । लकडाउन अघिसम्म जसोतसो काम पाएका बेलमाया परिवारका सदस्यले ६ महिनायता रोजगारी गुमाएका छन् । कान नसुन्ने भएकै कारण बेरोजगार हुँदा बेलमायाको परिवार आर्थिक समस्यामा परेको छ । बेलमायाले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट बोल्नुपर्दा काम पाउन गाह्रो छ । अझै त्यसैमाथि कोरोनाको डर बढी छ । कान नसुन्ने अपाङ्गहरूसँग खुलेर कुरा गर्न पनि चाहँदैनन् ।’ बेलमायाको परिवार बागलुङको हुग्दिशिर काफलठुटादेखि सैनामैनामा बसाइसराइँ गरी आएको हो ।
बेलमायाका पति कर्णबहादुर २० वर्षदेखि पक्षाघात (प्यारालाइसिस) ले थलिएका छन् । छोरा, बुहारी, नातिनातिको मात्र होइन, पतिको रेखदेखमा पनि बेलमायालाई फुर्सद छैन । प्यारालाइसिस भएकै कारण उनका पति पनि बोल्न सक्दैनन् । उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँ सकिए पनि निको नभएपछि अहिले कर्णबहादुर घरमै छन् । बेलमायाका ५ छोराहरू छन् । ४ छोरा कान सुन्दैनन् । तर बोल्न–सुन्न सक्ने कान्छा छोरा विकासको ४ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि तयार भएका उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर बितेको बेलमाया बताउँछिन् । बेलमायाको परिवारमा पति, ४ छोरा र ४ बुहारी अनि नातिनातिना हुन् । पति, छोरा, बुहारी गरी ९ जना बहिरा छन् । ४ छोरा जन्मैदेखि नै बोल्न नसक्ने भएका हुन् । सबै सांकेतिक भाषाबाट कुरा गर्छन् । छोराहरूको बिहे भइसकेको छ । बुहारीहरू पनि सांकेतिक भाषाबाट मात्र बोल्न गर्छन् ।
जेठा छोरा चेतबहादुर घरमा नै भैसी र बाख्रापालन शुरू गर्ने तयारीमा छन् । आमासँगै मजदुरी गर्दै आएका चेतबहादुरको रोजगारी कोरोनाले गुमेको छ । चेतबहादुरकी पत्नी हरिकलाको कपडा सिलाउने सीप भए पनि डिजाइनबारे नबुझ्ने हुँदा रोजगार पाउन सकेकी छैनन् । लामो समयपछि मजदुरीको लागि अवसर नपाएपछि अहिले चेतबहादुर सहकारीबाट ऋण लिएर घरमा भैसी पाल्ने योजनामा छन् । माइला छोरा शेरबहादुर काम खोज्नको लागि काठमाडौं गए पनि काम पाएका छैनन् । काठमाडौंबाट घर फर्किने पैसा नभएको भन्दै आफूलाई फोन आउने गरेको बेलमायाले सुनाइन् । साइला छोरा दानबहादुर र काइला छोरा तेजबहादुरले १२ कक्षासम्म पढेका छन् । पढेको भए पनि कान नसुन्ने हुँदा रोजगार दिन धेरैले आनाकानी गर्ने गरेको अनुभव तेजबहादुरको छ ।
‘बेटरको तालिम समेत मैले लिएको छु । केही समय बुटवलमा काम पनि पाए । तर सञ्चालक परिर्वतनपछि जागिर गुम्यो । कान नसुनेकै कारण अप्ठ्यारो भएको भन्दै मलाई जागिर दिएनन्,’ उनले भने । २१ वर्षका तेजले काठमाडौंबाट बिहे गरेका छन् । उनी पनि कान सुन्दैनन् । तेजबहादुर पत्नी सोनालाई सिलाइकटाईमा लगाउने इच्छा रहेको बताउँछन् । नातिनातिना साना भएका कारण बेलमायालाई सघाउन सक्दैनन् । त्यसैले पनि जीविका चलाउन गाह्रो भएको बेलमायाको भनाइ छ । सैनामैना नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रत्नबहादुर पौडेलले बेलमायाको परिवार समस्यामा परेको हुँदा नगरपालिका र वडाबाट हुने सहयोग गर्ने बताए । वडाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सुविधा सबैले पाउँदै आएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
दसैँमा गुन्जने १० गीत (भिडियोसहित)
समाजवादी पार्टीको संघिय परिषदको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वहाँको धर्म पत्नी हिसिला यमी दुबैलाई कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टी
२२ बैशाख २०७८, बुधबार १३:०३ bampijhyala 0
गर्मीमा छाला स्याहार कसरी गर्ने ?
गर्मी मौसममा छालामा धेरै प्रकारको समस्या देखा पर्छ ।...
५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६ bampijhyala 0
किन आउँछ नकारात्मक सोचाइ, कसरी भर्ने सकारात्मक सोच ?
जब व्यक्तिभित्र नकारात्मक भावको विकास हुन्छ । तब तनाव,...
१६ चैत्र २०७७, सोमबार २०:५३ bampijhyala 0
नियमित खाजाको रूपमा खान सकिने ८ परम्परागत खाद्य परिकारहरू
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल खाद्य परिकारको लागि पहिलेदेखि नै...
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १६:३५ bampijhyala
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १६:१७ bampijhyala
दोलखा जिल्लामै अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्ने डिसिसिएमसीको निर्णय
नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाण्डौंलाई ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९
कोरोना संक्रमणबाट विगु गाउँपालिकामा एक बालकको मृत्यु ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९
८ हजार ४६ थपिए, ५ हजार ४५५ कोरोनामुक्त, १८७ को मृत्यु ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९
बेइजिङ र मस्कटबाट ११५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइँदै ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९
दोलखा जिल्लामै अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्ने डिसिसिएमसीको निर्णय ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:३९